ဒီဇင်ဘာလရဲ့အစမှာ ကြည်နူးချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ မိသားစုပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ နှစ်သစ်ဆုတောင်းစကား ဆိုလာတဲ့ အောင်လအန်ဆန် – XB Media & News
မိသားစုအပေါ် အချိန်ပေးပြီး သားသမီးတွေကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ ဖခင်စာရင်းထဲ “မြန်မာ့စပါးအုံး” အောင်လအန်ဆန်လည်း တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကိုယ်ခံပညာသိုင်းပေါင်းစုံ အားကစားအဖွဲ့အစည်း ONE Championship ရဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီ ယံခါးပတ် နှစ်ခုပိုင်ရှင် ကချင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ မိသားစုနဲ့အတူ အခြေချနေထိုင်လျက်ရှိသူပါ။ အမေရိကန်ဇနီးသည် ကေတီနဲ့အတူ အောင်ဒီးဆိုတဲ့ သားတစ်ဦး နဲ့ ဆန့်ဆိုင်းဂရေ့စ်အင်ဆန်ဆိုတဲ့ သမီးတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ဟာ အေးချမ်းပြီး ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဝှေ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလည်း ပုံမှန်ပြုလုပ်လျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ကတော့ ယခုမှာချစ်ရတဲ့သားသမီးလေးတွေကိုအချိန်ပေးလျက်ရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာလည်း အောင်လအန်ဆန်က ဒီဇင်ဘာလရဲ့အစမှာ ကြည်နူးချစ်စရာကောင်း နေတဲ့ မိသား စုပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ နှစ်သစ်ဆုတောင်းစကားဆိုထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်တို့ မိသားစုလေးရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေဟာ မြင်ရသူပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်ကတော့ “Sweet December and Happy Holidays to your family from mine. May God bless you and your family abundantly this coming year. 🙏🏽❤️ “ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ ထက် မှာရေးသား ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် အောင်လအန်ဆန်တို့ မိသားစုလေးရဲ့ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ပုံရိပ် လေးတွေ ကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Source : Aung La Nsang(Burmese Python)’s Facebook Acc
မိသားစုအေပၚ အခ်ိန္ေပးၿပီး သားသမီးေတြကိုခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ဖခင္စာရင္းထဲ “ျမန္မာ့စပါးအုံး” ေအာင္လအန္ဆန္လည္း တစ္ေယာက္ အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစုံ အားကစားအဖြဲ႕အစည္း ONE Championship ရဲ႕ ကမာၻ႔ခ်န္ပီ ယံခါးပတ္ ႏွစ္ခုပိုင္ရွင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားျဖစ္တဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္ဟာ အေမရိကန္ျပ ည္ေထာ င္စုမွာ မိသားစုနဲ႔အတူ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိသူပါ။ အေမရိကန္ဇနီးသည္ ေကတီနဲ႔အတူ ေအာင္ဒီးဆိုတဲ့ သားတစ္ဦး နဲ႔ ဆန႔္ဆိုင္း ဂေ ရ႕စ္အင္ဆန္ဆိုတဲ့ သမီးတစ္ဦးပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္ဟာ ေအးခ်မ္းၿပီး ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတဲ့မိသားစုဘဝေလးကို တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ေဝွ႔ေလ့က်င့္မႈေတြကိုလည္း ပုံမွန္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနခဲ့တဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့ ယခုမွာခ်စ္ရတဲ့သားသမီးေ လးေတြ ကိုအခ်ိန္ေပးလ်က္ရွိေနခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုတစ္ခါမွာလည္း ေအာင္လအန္ဆန္က ဒီဇင္ဘာလရဲ႕အစမွာ ၾကည္ႏူးခ်စ္စရာေကာင္း ေနတဲ့ မိသား စုပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းစကားဆိုထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္လအန္ဆန္တို႔ မိသားစုေ လးရဲ႕ၿပဳံးေပ်ာ္႐ႊင္ေနတဲ့ ခ်စ္စရာပုံရိပ္ေလးေတြဟာ ျမင္ရသူပရိသတ္ေတြကို အခ်စ္ေတြပိုေစခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့ “Sweet December and Happy Holidays to your family from mine. May God bless you and your family abundantly this coming year. 🙏🏽❤️ “ဆိုၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္ မွာေရးသား ထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေအာင္လအန္ဆန္တို႔ မိသားစုေလးရဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကတဲ့ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကိုျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။